Kedu ka ị si ege egwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Egwuregwu ọgba tum tum - azịza maka okwu a
Egwuregwu ọgba tum tum - azịza maka okwu a
Kedu ka ị si ege egwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
('Back For Love' nke DJ Mayson) - M na-abụkarị onye na-agba egwu nke ịge egwu mgbe ọ bụla na mgbe ị na-agba ịnyịnya. Ọ bụghị naanị n'ihi na echere m na ọ ga-enye m mkpali ọzọ ma mee ka oge na-aga ngwa ngwa, mana ekwenyere m na ọ mere m ngwa ngwa, mana ọ bụ n'ezie? Ezigbo egwu ọ mere ka m gbaa igwe kwụ otu ebe ọsọ ọsọ? Abụ ọjọọ ọ ga-eme ka m kwụsịlata? Echere m na ọ bụ oge anyị mere ihe sayensị. Stefan, nye m enyo anya sayensị GCN Do.
Kedu ihe ị chere na ị nweghị ya? Oh, ha ga-ezuru. ('Back For Love' nke DJ Mayson) - Ezigbo ọmụmụ sayensị mere na isiokwu a site na Waterhouse et al. na Liverpool-John Moores University, ebe ha nwalere mmetụta nke ịbawanye ma ọ bụ na-ebelata egwu site na 10% na arụmọrụ ịgba ọsọ submaximal maka ndị na-agba ọsọ nwayọ.
Mana anyị enweghị mmasị na arụmọrụ pere mpe. Ee e, anyị chọrọ ịma ka egwu si emetụta arụmọrụ m kacha gbaa igwe. Yabụ ebe a ka anyị batara akara ule GCN.
Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ụgha. Anyị rutere n'otu n'ime okporo ámá kachasị amasị m na Cotswolds. Yabụ kedu ule ahụ? Agaba, m ga-etinye ihe kariri nkeji ato ma obu asaa.
Mgbalị nọmba onye na-aga na-achịkwa na nke ahụ ga-eme na-enweghị music. nke ahụ dịtụ ka ee, ị nwere echiche ahụ. A na-eji egwu nwayọ agba mbọ nke abụọ ma ọ dị ka nke a (downtempo chill dance music) wee gbalịsie ike nke atọ na egwu ọsọsọ ma ọ dị ntakịrị dịka nke ahụ (egwu teknụzụ siri ike) ee ee, ọ na-ewute m. ugbu a, na-atụ aro nkeji asaa maka ọrụ.
Ọ malitere na nkeji abụọ ma n'ihi ihe ụfọdụ anyị chere na ọ ga-abụ ezi echiche ịbawanye ya na asaa ma ọ dị ka nnukwu echiche mgbe m nọ n'ọfịs mana ugbu a enwere m afọ buru ibu maka nri ehihie .I ' m ụjọ. Naanị ngwa ngwa, ọ bara uru ịkọ nchekwa.
A ntị na egwu mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ isiokwu na-ese okwu. Echere m na ụfọdụ ndị na-echegbu onwe ha na ọ dị ntakịrị, nke ga-ebelata ikike ị nwere ịnyagharị okporo ụzọ gbara gị gburugburu ịnụ gburugburu. Ọ bụ ezie na enweghị iwu na UK nke machibidoro itinye ekweisi, n'onwe m naanị m ga-eyi otu na ntị aka ekpe m, n'akụkụ na-abụghị nke okporo ụzọ, ọ bụ ezie na, ime ihe n'eziokwu, ejiri m ma n'oge gara aga .
Mana maka ule taa, a ga m eji ekweisi abụọ. Agara m hie ụra n'abalị ụnyaahụ maka izipu otu email na ndị nhazi m ka m teta n'ụtụtụ nri ụtụtụ, enwere m nkụda mmụọ na ha niile zara na ha nọ n'ọrụ ma amaghị m ihe m Ọ bụ njem nke taa mere ka ha laa. Ma eleghị anya, ọ bụ ike atọ kachasị elu nke nkeji asaa.
Ka o sina dị, anọ m n'ahịrị mmalite ugbu a, na-achọ ịhapụ wahoo n'ihi na ọ bụ ule kpuru ìsì, enweghị mmụba obi, enweghị ike, enweghị ikike, enweghị ọsọ, ihe ọ bụla. Ya mere, Stefan, ị nwere ike ịdekọ n'azụ. Adị m njikere ịga - Ọ dị mma, ị dịla njikere Chris? - Adị m njikere - Atọ, abụọ, otu, laa. (Ugbo ala) (ikuku na-eku ume) (iku ume) (igwe gwongworo) - Atọ, abụọ, otu, ọ gwụla. - Ihe odide iri ise.
Maghị ókè ị gafere ma ọ bụ otu ike ị na-aga. Ihe niile m maara na ihe niile na-ewute Yeah, ị na-eche naanị gị, dịka oge ikpeazụ m amaghị na enweghị m oge na-eche m n'ihu mgbe m na-achọ ime ihe. Iche. (Downtempo chill dance chill music) Ọ na - adọpụ uche ịnụ egwu a dịka ọ dị maka na ọ dị otu a, amaghị m, mechie ọnụ ma mee ka ị na - eku ume nwayọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, echere m n'ezie na m ga-aga ngwa ngwa, nke dịkwa ntakịrị n'ihi na ọ dịghị ihe na-ewute ya n'otu ụzọ ahụ. O siiri m ike ịkwanye, n'eziokwu. Dịka, ị nwere ike ịnwe obere ibu karịa na mgbalị nke abụọ, ma ị nwere ike imerụ onwe gị ahụ na mbido ahụ.
Iche. Ugbu a oge asaa gara aga enwere m egwu na-agba ọsọ ugbu a ma nwee nchekwube, mana m ka na-atụ ụjọ maka mgbali n'ihi na ndị ọzọ ndị ọzọ dị egwu, na-eme ihe n'eziokwu. abụọ, otu, gawa! (hard techno music) ♪ rock na, ka anyị gaa! - Atọ, abụọ, otu - m gbalịrị ike.
Ah, nke a ga-abụ achicha kọfị maka nri ehihie. Egwu a nwere ọtụtụ ihe m ga-anụrịrị mgbe m ka na-agba ọsọ ma ọ bụ naanị ụdị ihe mere ka m nwee mmetụta nke enweghị mmeri na ụbọchị ọma. Ah, echegbula m.
Ha anaghị eme ọtụtụ oge, mana mgbe ha mere, dịka m kwuru ya, enwere m mmetụta dị ịtụnanya. Echere m na ihe a niile sitere, ruo taa m ka kwenyere na m nwere ndepụta ọkpụkpọ ziri ezi, na-agafe dum na-ekpo ọkụ nke ọma, ọ dịkwa ka nke ahụ, ọ dị mma, m ga-azụ onwe m laghachi na cafe n'ihi n'ezie anyị mere ya iji kwado kafe anyị wee tụlee nsonaazụ ya mgbe anyị gachara ọzọ. Yabụ mgbe anyị gbalịsịrị mbọ ike atọ, anyị laghachiri n'ụlọ mmanya ahụ.
Ọnụ ọgụgụ otu mgbalị bụ 382 watts. Nke a bụ mgbalị na-enweghị egwu ma ọ bụrụ na ị cheta. 172 obi obi, cadence 84, na 44 kilomita kwa awa.
Maka ngụkọta kilomita 5.14. Mgbalị nọmba abụọ na-eji nwayọ mus Ma nke ahụ bụ isi ihe mere o ji gbaghaa m siri ike ịga.
Ga-achọpụta nke a site na ụda obi m, nke bụ ụda isii kwa nkeji obere, nkezi nke 166 watts. Mmiri ahụ dịkwa obere, 359. Ogige ahụ dị ezigbo nso.
Nke ahụ bụ n'ezie 85 rpm na ọsọ 43.5 kilomita, nke na-enye m ngụkọta nke 40 mita na-erughị na 5.1 kilomita.
Mgbalị ikpeazụ, egwu, nke ahụ bụ egwu ngwa ngwa, ụdị egwu m nwere ike ịnụ ka m na-ege ntị mgbe m na-egwu egwu ka m na-agba ọsọ. 385 watts, atọ karịa njikwa na-agba ọsọ, 176 na-eti kwa nkeji, nke n'aka nke ọzọ karịa ndị ọzọ, ihe ọkụkụ anọ kwa nkeji dị elu, 86 RPM na mgbe ahụ 45.6 kilomita kwa elekere, nke dị ọtụtụ ọsọ, 1.6 km / h ngwa ngwa, maka ngụkọta anya nke 5.34 km.
Ọnụ ọgụgụ obi na ike niile dịcha mma, yabụ enwere m ike ịgba ịnyịnya karịa, ikekwe m manyere ike n'elu ugwu ahụ wee zuru ike na mgbago ahụ. Kinddị oge lekwasịrị anya oge ikpe ef na ọ bụrụ na ị ga-agba ịnyịnya ígwè ị ga-eme ya ma ị lekwasịrị anya na itinye aka. Ihe a rụpụtara juru m anya. Ee ee ee ee.
Ihe m na-ekwu bụ, achọpụtara m na nwayọ nwayọ bụ ihe ịtụnanya karịa n'ihi na ọ na-esiri m ike ilekwasị anya, achọpụtara m ma na-ege ntị na egwu kama itinye uche m n'ọrụ m chọrọ ịme igwe kwụ otu ebe, yabụ ọ mere ka m kwụsị. gbadata ntakịrị. A bịa n’egwú dị ngwa, nke ahụ anaghị eju m anya ma ọlị. Anụla m egwu dị ọsọ ọsọ na listi ọkpụkpọ mgbe afọ gwụchara maka ọzụzụ ma ọ bụ ịgba ọsọ, amaara m nke ọma na ọ na-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka m nwee mkpali, nke pụtara na m nwere ike ilekwasị anya na mgbatị a na-eme ya ka ọ bịa. .
Otu ihe anyi matara banyere ule a bu na, n'ezie inwale mmadu ihe kariri ugboro ato ezughi ezu ime ezi nkwubi okwu. Iji mee nke a, anyị ga-anwale ọtụtụ ndị gafere ọtụtụ mbọ na ọfụma na anyị ga-eme nke a ọzọ ọtụtụ ụbọchị. Mana anyị ejirila nghọta anyị kụpụ elu ma ghọta na egwu nwere ike inyere gị aka ị nweta onwe gị na igwe kwụ otu ebe.
Kedu ihe nke ahụ pụtara gị n'ụlọ? Ọfọn ọ pụtara na ị kwesịrị ịtụle egwu dị ka onye na-akpali akpali. Ọ bụrụ na ịnweghị obi ike na nkasi obi na-eyiri ekweisi, ma ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ iwu na ị ga-apụ apụ na ebe ị bi, ị ka nwere ike iji ha na onye na-azụ ụlọ ma ọ bụ jiri ha dị ka ihe enyemaka na-akpali akpali tupu ịkwọ ụgbọala na-egwu egwu nke nwere ngwa ngwa. Egwu na-agagharị na egwu na-adịghị nwayọọ nwayọọ. Ngwa ngwa ngwa maka oge etiti gị na oge ezumike gị, ịnwere ike iji nwayọ nwayọ nwayọ.
Ihe a niile na-eduga m na ajụjụ ikpeazụ. I n’eji egwu n’ulo akwali onwe gi? Ọzụzụ? Ọ bụrụ otu, kedụ ka ị si eji ya? Mee ka anyị mata n’igbe ndị dị n’okpuru. Ọ bụrụ n’ịchọtara isiokwu a na-atọ ụtọ ma mụta ihe na ya, nye anyị nnukwu isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele karịa isiokwu sayensị GCN, mfe pịa ebe a.
Nwere ike ịnweta afọ dị larịị site na ịgba ịnyịnya ígwè?
Ntuziaka 10 iji chebena-ege ntị music mgbeagba ọsọ ma ọ bụigwe kwụ otu ebe
Hapụ otu nti ntị.
Ejila mkpọtụ-akagbu ekweisi ma ọ bụ earbuds.
Gbalịa isi ihe na-eme ọkpụkpụ.
Jide olu gị ala.
Lelee ngwa ngwa ikuku tupu ị gawa.
Clip na okwu Bluetooth.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè, tinye ego na Bluetooth.
Ọ bụrụ na ebum n’uche gị bụ ka ị felata, mgbe ahụ ịgba ígwè bụ ụzọ dị egwu iji mee ya. Ozi ọma ọzọ ọ bụrụ na ịgba ịnyịnya bụ naanị ihe mgbaru ọsọ gị, ifelata ma nọgide na-arụ ọrụ ga-eme gị ngwa ngwa. Eeh, yabụ dịka ọmụmaatụ onye na-agba ịnyịnya 75 nke na-agba ịnyịnya ogologo ugwu ga-erute n'elu nkeji oge ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ funahụrụ naanị kilogram 2 - ee, na iji were ihe atụ a gabiga oke, na esemokwu dị iche iche buru ibu.
Ya mere, onye na-agba 90-paụnd ga-azọpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji ise na ọkara ma ọ bụrụ na ha jikwaa ida 10 pound n'okpuru otu ọnọdụ ahụ, mgbe ahụ, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji belata ibu? Ugbu a, nke a bụ ndụmọdụ ise dị mfe ma dị mfe ga - enyere gị aka ime nke a. - Ọtụtụ afọ gara aga, a gwara anyị niile na ụzọ kachasị mma isi belata oke ibu bụ itinye oge dị ukwuu na mpaghara a na - akpọ mpaghara ọkụ ọkụ. Nkwupụta a bụ na na ike dị ala, ị ga-agba abụba dị ukwuu nke abụba ma e jiri ya tụnyere carbohydrates karịa nke ike a dị elu - nke ahụ dịkwa mma ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ ụbọchị niile, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime anyị enweghị okomoko a .
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-anwa ịrụ ọrụ oge niile mgbe ahụ nnukwu ike bụ ihe - ee, ị ga-ere ọtụtụ calorie karịa kwa elekere na njem siri ike, nke siri ike karịa ogologo ọrụ na sadulu. Na njedebe nke ụbọchị, ifelata bụ ihe niile gbasara iwekwu calorie karịa ka ị na-eri. Na mgbakwunye, ị nwere uru elekwasị anya nke ịbụkarị onye agụụ na-agụ obere mgbe ịkwọ ụgbọala kpụ ọkụ n'ọnụ karịa ka ogologo oge gachara, nwayọ nwayọ, n'ihi ya ị ga-enwe ike ịribiga nri ókè ozugbo ị gafere n'ọnụ ụzọ. - N’ebe a na GCN anyị nwere oge dị mkpirikpi, kpụ ọkụ n’ọnụ nke ị nwere ike ime n’ime ụlọ.
Ọ bụrụ n’itinye ihe abụọ ma ọ bụ atọ n’ime ndị a ka ị na - emega ahụ kwa izu, ị nọ n’ezi ụzọ. Onye na-emegbu mmadụ. Ugbu a i aụworo mmanya nke ọma, agụụ agaghị agụ gị ugbu a.
Yabụ nke a bụ ntakịrị ntakịrị aghụghọ gị. Mgbe ị rutere n'ụgbọ ịnyịnya gị, nwee nnukwu iko mmiri, ma eleghị anya pint ma ọ bụ karịa, tupu ị rie nri. Ọ ga-eme ka afọ jujuru gị afọ, yabụ na agụụ agaghị agụ gị mgbe ị na-eri nri, yabụ na ị ga-eri oke nri.
Ma ị nwere ike ịme aghụghọ a tupu isi nri ụbọchị. Nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị na ọbụna tupu ụtụtụ na ehihie nri. Icebọchị dị mma, nwee obi ụtọ. ♪ - Ntuziaka nọmba atọ.
Rie obere ma mgbe ị na-anya ihe karịrị 90 nkeji. O nwere ike ịdị gị ka ọ bụ ntakịrị ihe ugbu a ka ị rie karịa nke ị na-erikarị, ọkachasị mgbe ị na-achọ ifelata, mana buru anyị ya obere oge ma anyị ga-akọwa.- Ee, lee ka you na-achọ felata, enwere ọchịchọ ịbelata ego ị na-eri n'oge mgbatị ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị rie obere obere na oge mgbe ị na-eme njem, ị nwere ike ịchọpụta na agụụ ga na-agụkarị gị nke ukwuu mgbe ị gafere n'ọnụ ụzọ ma yabụ na o yikarịrị ka ị gaghị eri nri. You nwere ihe ọ bụla fọdụrụ? - Ee e, ọ gwụla. - Aargh. ♪ - Nke oma, nke ozo nwere ihe jikotara ya na onu ogugu, nke ahu bu kwa ihe siri ike.
Yabụ ọ bụrụgodi na ị naghị ezube akụkụ nke oge zuru oke, ị nwere ike imere onwe gị ọtụtụ ihe site na ịtụba oge ụfọdụ dị elu na njedebe nke ịnyịnya gị - nke ahụ dị mma. Nnyocha egosiwo na oriri mgbatị post-mgbatị ahụ nwere ike inyere aka gbaa abụba. Zọ kachasị mma iji banye na steeti a bụ ịgbalịsi ike na njedebe nke njem ahụ, n'ụzọ ahụ, ahụ gị ga-agbanye ọtụtụ calorie ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọdụ ala na sofa.
Kedu ka o si dị mma - Ee, nke ahụ bụ ihe kachasị mma. - Ndụmọdụ ikpeazụ anyị bụ isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ma dee ha na tebụl dị arọ. Ugbu a, gbaa mbọ hụ na ebum n’uche gị ka ị ga-eru n ’ihi na o nweghị ihe dị njọ karịa isetịpụ ihe ndị ị na-agaghị emeli.
Dekwaa ha ma debe ha ebe ichoro ihu ha anya, dika n'ọnụ ụzọ friji, ma otu ahu, o yikarịrị ka ị ga-arapara na atụmatụ gị. - Eeh, dika Matt kwuru, ikwesiri ibu oso mgbe nile. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ ebe ahụ na-atụ aro ka ị ghara ịdị na-atụle onwe gị kwa ụbọchị, mana echeghị m na nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụrụhaala na ị na-eme ya n'otu oge kwa ụbọchị.
N'ezie enwere ụbọchị mgbe ọnụ ọgụgụ a na-arịgo ntakịrị, mana ọ bụrụ na ịdebe ụdị eserese nke ibu gị kwesịrị, ka oge na-aga, n'ime ọnwa ole na ole, hụ na usoro a na-emekarị nke ahịrị agbadata ihe mgbaru ọsọ. ♪ - Ma ugbu a, a n'ọnụ na ihe agaghị eme. Nke a bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịdụ ma ọ bụ hụ ka ndị ọzọ na-eme kemgbe ọtụtụ afọ, mana ọ kachasị na France.
Otú ọ dị, ọ bụ mmiri niile. Ya mere, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ịdị egwu, mana ozugbo edoziri gị nke ọma, ibu niile ga-alaghachi. - Emela ya. ♪ Ya mere, - Ya mere, ị nwere ya.
Iji mee ka ị ghara ibu ibu, ịkwesịrị ịhazi ọtụtụ njem dị egwu, drinkụọ mmiri nke ọma, na-eri nri mgbe niile na njem ndị toro ogologo, were obere oge na njedebe nke njem gị mgbe niile, setịpụ ihe mgbaru ọsọ ma dee ha. N'ikpeazụ, eyikwasịla uwe gabiga ókè iji belata ibu. Dị mfe, n'ezie - Ee, dị nnọọ mfe.
Ọfọn, anyị ekwuolarị isiokwu anyị banyere ọzụzụ n'ime ụlọ. Yabụ ọ bụrụ na ị pịa ebe ahụ, a ga-akpọrọ gị gaa ebe anyị nọ ebe anyị nwere mgbatị siri ike dị ukwuu. Ma ọ bụ nanị ala n'ebe ahụ, mụ na Matt mere otu isiokwu banyere igwe igwe igwe igwe ma ọ na-emetụta arụmọrụ ịrịgo gị.
Yabụ enwere akara ngosi dị mma n'ebe ahụ - na ịdenye aha na GCN, kedu maka ị pịa ọmarịcha mma ahụ? echefukwala 'inwe mmasị' n'isiokwu anyị, ma ọ bụ nke a. Na ndị ọzọ kwa.- Karịsịa.- Ee.
Ee!Cgba ígwè nwere ikeEnyemakagịkanweta ewepụghị afọ. Manaị nwere ikegbara abụba na ntopute ahụ siteịgba ígwè.Cygba ígwèbụ ihe dị egwu na-ere ọkụ kalori 130-paụnd ndị mmadụnwere ikegbaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ calorie 600 n'ogeotuoge nke ike okirikirina-agba ịnyịnya.
Ridnya ịnyịnya nwere ike ịbịaru n'ụdị na nha niile, mana ọ bụrụ na agbanyeghị gị oge maka oge, ịnwere ike ịnwe njem kwesịrị ekwesị na nkeji 30. Anyị chere na anyị ga-anwale ya wee hụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta draịva kwesịrị ekwesị naanị ọkara awa, were nyocha na ngwa gcn nke ị na-achọ. Ebe ọ bụ na ọnọdụ abụghị otu maka onye ọ bụla, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ezigbo ndụ ihe atụ nke ihe anyị dịka gcm moderators na-eme mgbe anyị nwere naanị 30 nkeji iji mee itapenlets gocycling akpụkpọ ụkwụ 30 nkeji nke na-adịchaghị ogologo iji wee njem ụzọ.
Echere m na ọ ga-ewe m nkeji 30 ka m wee si n'ọnụ ụzọ m jiri ihe m na-apụ na Mypike, nke ahụ ga-abụ ihe na-enweghị isi maka m ezigbo nnọkọ na nkeji 30 na turbo na-agbanwe ma na-asa ahụ mgbe obere oge na-ekpo ọkụ 2040s na Aga m eme nke a site na iji ọkụ na obodo oyi oge ọ bụla enwere ike, yabụ echere m na m nwere ike ịme 10-15 nke m ga - eme ka a hazie ya ka m wee gaa njikere iji kwadebe ngwa m na igwe kwụ otu ebe m dị njikere okay m na-eche na nke a bụ ihe kasị ihe m mgbe kpaliri obere ihe karịrị nkeji abụọ gara aga na oge pịrị aka na-arụzi ụgbọala m nnọkọ malitere m wahoo ok otú ahụ ka m na igwe kwụ otu ebe were obere oge m na-atụ anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji anọ, mana m na-eme mkpesa na m ga-enyerịrị onye ofufe ahụ n'ihi na ọ dị m ka ọ na-ekpo ọkụ, n'ihi ya, m ga-echebara nke ahụ echiche, ọ dị mma, yabụ ugbu a, m bụ nkeji anọ na 30 sekọnd n'ime ọkụ m, echere m 20 sekọnd tupu m bido mgbalị mbụ m, ọ dị mma, ugbu a ọ bụ nke m, ọ na-adị m obere nrụgide ọ pụtara na m di enweghị ezigbo mma m na-enwekarị ezigbo minit 10-15 mana ee echere m na anyị ga-abanye n'ime akụ mbụ ndị a, m ga-ewere ha na mbụ obere ntakịrị ma anyị banye n'ime ha ka m nwee anọ sekọnd ka m ga - esi pụọ ọtụtụ oge anaghị m ama otu oge, kedu ụbọchị n'izu ọ bụ, yabụ nye m nkeji iri atọ ma ịmara na ọ ga - abụ oriri mebiri emebi ma ọ bụrụ na ọ jụrụ oyi ma achọghị m anọghị n'èzí Anọ m ebe ahụ ogologo oge ma ọ bụ na m nwere atụmatụ ime na ezinụlọ. Amaara m na m ga-eme ya ngwa ngwa ka m wee na-eme ka okporo ụzọ mgbochi banye na mpaghara ahụ, gbanwee, anyị ga-akụ ya, anyị ga-eti ihe mgbaru ọsọ ozugbo m si n'ọnụ ụzọ pụta, enweghị ọgbaghara Ihe dị ka abụọ atọ Nkeji naanị iji fụọ ụdọ ụkwụ m ka m kpoo ọkụ, nwee ntụsara ahụ na igwe kwụ otu ebe ma werekwa obi obi nke 120 gaa 140 maka nkeji ise iji mee ka m na-agagharị ka m wee kwadebe maka mgbatị ahụ m nwere ike ime nke ahụ n'otu ntabi anya, ya mere, anyị nwere atọ nkeji, ini enwe n'apata ngụ oge dị na-ebili. Maka nkeji ise na-esote, achọrọ m idobe ọmarịcha, dị elu, achọghị m ịkpalite ahụ ike nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị oge buru ibu, ị chọghị ilekwasị anya n'ịmụta Biggear iji nweta obi ọnụego dị elu karịa ịchọrọ naanị otu nzuzo na-eme ka ije ije gị dị elu na sistemụ obi ọ bụchaghị ịkọwa ahụ dum nke na-abịa na nkeji ole na ole dabara na njem 30 nkeji ọ ga-esi ike, mana echere m na ọ bụ enwere ike ime ya ma achọrọ m iji nke a dị ka ohere iji gaa naanị ịnya ịnyịnya ígwè mara mma, gbasaa ụkwụ m, na-eme ngụgụ m, bụrụ otu na okike, oge udo n'etiti etiti ụbọchị ikekwe ma ọ bụrụ na ụbọchị m bụ na-enwe nrụgide, ha ka mma, gbanwee uwe gị.
Jidesie ike, ịnọghị ebe a, lepụ anya maka ihe mkpuchi nke okpu nzuzo nke abụọ, adịla m njikere, apụla m, apụla m n'ọnụ ụzọ, ana m apụ n'èzí oh na-adị m mma apụ ugbu a, o were m nkeji abụọ iji kwadebe n'ihi na m bechapụrụ ihe niile ahụ na-atọ ụtọ-kit site n'ọnụ ụzọ na igwe kwụ otu ebe m kwere onwe m 13 nkeji oge ịkwọ ụgbọala nke m ga-eme n'otu ụzọ n'okporo ụzọ m, emekwara m Nke a n'ihi na achọghị m ịhọrọ akaghị aka nwere ike ịdị ogologo karịa ka ọ nwere ike ịdị na akwụkwọ, yana n'ihi na ọ pụtara na amaara m na m ga-atụgharị ma laghachi azụ ka m wee nwee ike ịlaghachi n'oge, yabụ ọ bụrụ ime 30 nkeji? na otu direction 13 nkeji azụ na nke ahụ bụ 26 nkeji ngụkọta oge oge ya mere m nwere ndị abụọ nkeji njikere iji kwadebe, nye m abụọ ọzọ nkeji ịgbanwe mgbe e mesịrị n'ihi na m nwere a dị nnọọ mkpa nzukọ mgbe ahụ, ya mere, m ga-eme ka n'aka na m na-azụ na oge ka onye ọ bụla wee nwee ike ịnwe ịnyịnya ibu dị elu na nkeji iri abụọ na abụọ26 nkeji oge ịkwọ ụgbọala m gbanarịrị ọkara awa m rutere akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe mana echeghị m eche na m ga-ewere otu egwu gbasara ide banyere ya mgbochi mmiri mgbochi mmiri mgbochi mmiri akpụkpọ ụkwụ na ọ chọrọ n'ezie ka m bụrụ abụ maka bluesnow m 30 nkeji mgbatị, m ga-esi n'èzí na-aga a ole na ole ugwu nta na bath ebe m bi n'ihi na ha bụ n'ezie nso otú m nwere olileanya na m nwere ike ime ezi 10 nkeji nke vo2 max mgbatị na windo a, kedu ihe m ga-eme? n'ihi na ọ na-ewe m 10 nkeji iji kwadebe, yabụ enwere m naanị nkeji 20 ka m rịgoro inutes, nkezi bụ 10, o siri ike, mana echere m na m nwere ike ịme nnabata abụọ dị mma ebe a, ihe dịka 380 400 watts wee bụrụ ihe dị ka nkeji 10 n'ụdị mkparịta ụka ndị a nke vo2 max endstop m nọ na turbo 19 na ọkara nkeji ugbu a, m kwụsịrị ịgụta mbọ 20 m gbalịsiri ike abụọ m mere kama amalitere m ịmụrụ anya m swearụọ iyi, obi m na-abawanye, yabụ enwere m ezigbo mgbatị ahụ echere m Enwere m ike karịa na nke ahụ ga-apụta nkeji ise ọzọ oh mba m ga-ajụkwa oyi, ee ise ọzọ na nkeji abụọ nke cooldown n'ezie gbanwere ụkwụ m wee hụ ma m ga - agagharị na naanị nkeji atọ nke ga - abụ ihe niile dịkwa mma ka anyị mee obere mbọ m nwere ike ịchọrọ ugbu a, mana m gara n'okporo ụzọ maka ọfụma, dị mfe nkeji iri, Enweela m onwe m ebe a na nke abụọ, na-eme nzaghachi m nke abụọ na elekere na-agba ọsọ ihe dị ka nkeji 26 nke pụtara na enwere m nkeji anọ iji wee laa n'ụlọ ma gbanwee, nke ahụ bụ nzuzu nzuzu ea oh godoh, a ka m mma jiggle this much for a cool down kay so I not be on my ride for asaa nkeji ma a chere m na m just just tsaya a bit n'ihi na achoputara m mma blakberị. Echere m na m na-abịakarị ebe a n'oge mgbụsị akwụkwọ iji kpọpụta ha ka ọ bụrụ n'oge na-adịghị anya iji mee ihe n'eziokwu na achọpụtara m ebe a, m ga-akwụsị ma hụ m ga-anwale ha ezigbo kemmiri ihe ntakịrị ntakịrị tart otu ntakịrị were m iwe ị gaara anọ ogologo oge izu abụọ echere m na ọ dị mma ka m mara ma agbanyeghị m ịgbawa nke ọma n'ihi na nke a na-eri obere oge dị oke ọnụ, enwere m ọchioma ịnwe nke a dịka obere njem dị egwu n'oge ezumike nri ehihie m, ịgwa gị ugwu ahụ bụ ịrị elu dị elu adịghị elelị ya ruo n'etiti Myride na Carrick na uwe elu na ogologo na akwa n'elu osimiri ahụ ugbu a ma dịka ị ga-ahụ ebe ọhụụ magburu onwe ya site na ebe a, osimiri ahụ amachagoro m kwesiri ikwu na anyi nwere otutu mmiri ozuzo ya mere o di ka ochichiri mara mma karisia nke a nke na-enweghi ike inwe ihe mberede, echekwala na o na-abanye ugbo ala n'ime ọkara awa oh enwere m ntakịrị ihe furu efu, ọ kara m mma ịlaghachi n'ihi Ọ dị mma, ụzọ gasị na-ekwu okwu dị oke mkpa ma na-eme ihe n'eziokwu, enweela m ntakịrị c Enwere m nsogbu n'ihi na m nọ n'elu ugwu, ọ na-ewe m 30 nkeji iji rute ebe a ma ụzọ m ga-esi laghachi azụ, nke a adịghị na atụmatụ m, echeghị m banyere ya, echeghị m ya ma ọlị Ekwesịrị m ịkwaga ma ọ bụrụ na m ga-eme nzukọ a n'ihi na ọ bụ nzukọ dị mkpa oge 30 nkeji nwetara ihe niile ziri ezi ka m mechara okwu a nkeji abụọ n'ọnụ ụzọ ikpeazụ 30 sekọnd m ga-akụ ya nke ọma ma m ga-ewere abụọ nkeji ezumike ime 30 sekọnd niile outokay, otú mbụ nkeji abụọ na-eme, ugbu a, m nwere nkeji abụọ free na m nwere ihu ọma dị na-aga na-ajụkwa, mgbe ahụ, m ga-eme ya ọzọ, ọzọ abụọ nkeji. Abịara m ebe a n'olulu aja dị na mpaghara a iji tinye ezigbo mgbalị ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-ekpori ndụ maka m n'ihi ya enwere m obi ụtọ ịmefu oge 30 nke ụbọchị m, ikekwe ka ọtụtụ n'ime gị na-eme n'okporo ụzọ pasent abụghị ihe na-enweghị isi, yabụ m ka nwere sekọnd 60 iji zuru ike, mgbe ahụ, m ga-eme abụọ ọzọ n'ime mbọ nkeji abụọ a, mgbe ahụ, m ga-arụkwa ọrụ igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma, ka anyị bido na nke abụọ a , ka anyị gaa nke abụọ ga - emecha, anyị nwere nkeji abụọ ọzọ ma aga m eme nke ikpeazụ m nke ụzọ abụọ ndị a Vo2 nke na enweghị m ihe ọ bụla iji cheta nnọkọ a chọrọ akụrụngwa m akpụkpọ ụkwụ m igwe kwụ otu ebe wee chefuo oghere weld. atọ m nwere ike ime ya ọbụna karịa na-eme mgbalị, mgbe ahụ, m nwere ike ịkpọ ala M ga-mgbe na-atụ aro na-ekpo ọkụ nke ọma ma na-eme ka a ezigbo oku ekwentị mgbe ọ bụla ị na-eme a nnọkọ dị ka nke a, ma ma m chere na m nwetara ya ma m doro anya adaghị agbada na 27 nkeji ma achọpụtara m na nkeji abụọ nke oyi mgbe nnọkọ siri ike dị otú ahụ abụghị ogologo oge ugh, ukwu m ka na-enwu ọkụ, Obi m ka na-adi elu ma oburu na m si na ukwu m puo ugbu a, ukwu m ga akari m echi, ya mere m ga ano na turbo maka obere oge iji mee ka obi dajie m nke oma. enweghị m ihe mgbu ma emechaa, mana kedụ ihe m chere, nkeji atọ iji pụọ wee saa ahụ? O wee pụta na atụghị m atụmatụ nke ọma na m ga-esi ike ka m nwere ike ịlaghachi n'ụlọ megide Hillah Power na ya mere ndị etiti oge na-eme, ugbu a ọ bụ oge ime ihe kwụsịrị ọrụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na m na-adọba igwe kwụ otu ebe ma ugbu a, m ga - ewepụta sekọnd 20 ọzọ ka m na - arụ ọrụ m ga - alaghachi ugbu a, m ga - aga n'ihu na mbọ ndị a, ugbu a, otu ọzọ, enwere m ọrịa, huhso maka ihe niile ahụ enwere m mpaghara m bi na - anaghị apụ apụ agabeghị aka n'ụlọ, enwere m mbọ ikpeazụ m ga - eme, aga m eme nke a n'akụkụ ụzọ mgbe m na - alaghachi n'ụlọ m Ọ dị mma, ugbu a 20 sekọnd ziri ezi ka m jisiri ike nwalee ya na ịrịgo na A na m achọ ịla ụlọ m ugbu a, echere m na m doro anya na m nwere 25 nkeji ịkwọ ụgbọala yabụ enwere m nkeji atọ iji laa n'ụlọ, nkeji abụọ, ka agbanwee, wee bie m laghachi ọrụ na ọkara otu awa ka ọ dị ugbu a, enwere m obi ike na m ga-ahụ ya na tebụl m ka m mechara nzukọ m, enwere m ike ịmebeghị njem kacha njọ mana ị maara ihe ọ dịghị mkpa n'ihi na m pụọ m hav e ezigbo ikuku ma amachagoro m dị mma karịa ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ na ndụ anyị anaghị eme ihe maka na anyị enweghị ike ịme ihe niile anyị ga - eme karịa ịme obere ihe ma ịmara, oge ụfọdụ ihe niile ị nwere ime dị mfe ịpụ ebe ahụ, ịgbagọ ụkwụ gị ma nwaa ya na nke ahụ bụ ikike anwansi ya mere m ga-alaghachi wee wuo ya niile n'ime njem m ka m wee laghachi n'oche m ihe dị ka nkeji ole na ole ma ama m ugbua Emeela m nkeji atọ kpoo ọkụ m mere obere m dị mfe ije m mere m nkeji abụọ na nkeji abụọ kwụsịrị igwe kwụ otu ebe na-agba ọsọ na sprints ugbu a, m ga-ic h eme a ole na ole ikpeazụ Sprint rụchaa a ikpeazụ nke mere na nke ahụ bụ ya 30 nkeji oge m dị ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịpụ na ebe ahụ, ọ ga - adị gị mma karịa ị ga - enweta ọbara na - aga n'ụbụrụ gị ị ga - enweta onwe gị nke ọma ị ga - enwe mmetụta ị nwere ihe na obere dị mma karịa ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla a na-ekwu mgbe niile nwee anụrị, jide n'aka, daalụ maka ile ha niile anya.
Echere na ị nwere mmasị na nke a ma enwere m olileanya na ọ kpaliri mmụọ nsọ gị ịbanye na igwe kwụ otu ebe ma nwee ọmarịcha obere njem ndị a, mana biko mee ka anyị mara na ihe ndị a n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ọkacha mmasị maka obere ụta ị ga-enwe ọ wouldụ ga-eme? eme ma ọ bụ ọzụzụ ọkacha mmasị ma ọ bụ obere njem kachasị amasị m n'okporo ụzọ obodo dị ka m ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị dịka anyị niile ma biko mee ka anyị mara na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a ka ị hụ gị n'oge na-adịghị anya, ekele maka ile mmadụ niile anya ma nwee ọ haveụ na-agba ịnyịnya
Kedu ka m ga-esi mee igwe kwụ otu ebe m?
Anyị niile nwere mmasị ịnya ịnyịnya ígwè anyị, mana gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ịnya ịnya gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị? Ọfọn, otu ibu zuru oke nke hacks maka ime nke ahụ. (Biker na-ebe ákwá) Gịnị dị njọ? - M na-ebe ákwá maka ọ joyụ. Ridezọ dị mma dị otú ahụ. (egwu egwu na-atọ ọchị) - Igwe na-eme mkpọtụ, nke na-agbanwe n'onwe ya mgbe ị na-agba ịnyịnya bụ n'eziokwu ihe nro.
Na ihe bụ, ọ na-adịkarị gị mfe, n'ụlọ gị, na-edozi n'ihu gị ọbụlagodi ịga ịnyịnya. Karịsịa na nnukwu nnabata anyị nke isiokwu mmezi. Nke a bụ etu m siri chee, ọ bụrụ n ’ị na-eche banyere igwe kwụ otu ebe gị tupu ị gbagoo, ị gaghị eche banyere igwe kwụ otu ebe gị ka ị na-agba. (egwu dị egwu) ọ bụghị oge ị gbanwere Euro? Anyị na-eche n'echiche.
Yabụ gbanwee nkeji dị na ngalaba gị site na kilomita ruo metric ma ị ga-aga n'ihu na ọsọ ọsọ na njem gị - Wow! - won't gaghị apụ n'ezie. Ga-ebugharị otu ọsọ ahụ. Ma ọ dị mma, ọnụ ọgụgụ buru ibu na ị ga-enwe ọtụtụ ọkachamara - enwere m mmetụta na ị nwere ọkachamara karịa. Ebe ọ bụ na anyị na-amalite ma kwụsị njem anyị n'otu ebe, ọ dị ka ọ baghị uru ịchọta ụzọ mkpirisi.
Agbanyeghị, ọ na-egbubi ụzọ na-ekwo ekwo ma ọ bụ na-eme ka ị banye n'okporo ámá kachasị amasị gị ngwa ngwa, ọ ga-abụrịrị ihe dị mma, nri? Tupu ị gawa, mee obere nyocha na eserese ngosi ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ okporo ụzọ ma ọ bụ ụzọ ọ bụla na-eweta ụzọ mkpirisi. O nwere ike ịbụ ntakịrị gravel ma ọ bụ ngalaba okporo ụzọ, mana m nwekwara ike ịbụ ọtụtụ ọ funụ. - Ọ na-esi ebe a abịa? - Ee, obere ụzọ mkpirisi. - Oghom dam. (egwu egwu dị egwu) - oge dị mma maka gị.
Ọfọn, maka ahụike gị, mana ka anyị chee ya ihu, ha anaghị atọ ụtọ. Ga otu rịgoro na otu rịgoro ahụ, ruo ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ daa ọrịa, gịnị kpatara anyị ji eme nke a? N'ihi na ọ na-arụ ọrụ. Ma a ga-enwerịrị ụzọ ọzọ. - Ọfọn, enwere.
Ihe ikwesiri ime bu ka ije di nma, nke diri ugwu ma gawa ulo akwukwo ochie. Ya mere chefuo maka ọsọ gị, ike gị, na obi gị, ma gaa n'ihu. Sprint na aghara, gaa ike ma ọ bụrụ na ị chọrọ, na-aga mfe ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịkwụsị n'akụkụ ụzọ iji nwee ọ theụ na nlele ahụ? , naanị mee nke ahụ - Ọ ka mma maka m. (funky egwu egwu) - N'ikwu okwu banyere nke a, mee ya nke ahụ. Kwụsị ma zuo ike.
Ọ bụrụ na ị ga-asụ ngọngọ na echiche dị ịtụnanya ma ọ bụ ọdịda anyanwụ wdg wee kwụsị. Were ya niile, nuo, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, wepụ ekwentị gị ma see ya na igwe kwụ otu ebe n'ihu. Wee zitere anyị ya na GCN ma ọ nwere ike ịpụta dịka otu n'ime foto anyị na-akpali akpali kwa ụbọchị. (funky egwú music) Ọ dịghị ihe dị ka ụlọ ahịa kọfị na-atụ anya na-agba ịnyịnya. - Ee e, ọ dịghị adị.
Ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu, mgbe m na-akwọ ụgbọala oge niile, m ga-adị njọ, anaghị m akwụsịkarị n'ụlọ ahịa kọfị mgbe m na-azụsi ike. Ma ugbu a, enweghị m ike ịdị oke njọ ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa. - Ee, ọ dị mma, njem ahụ kwụsịrị, ka anyị kwuo eziokwu, kọfị na achicha na-atọ ụtọ nke ọma. - Eeh.
Karịsịa apụl strudel. - Apple strudel, - Ana m atụ anya ya. (egwu egwu dị egwu) - Ọ dịghị ihe dịka ịkwụsị ịgba ịnyịnya na ezinụlọ.
Ọ bụ ezie na nke ahụ agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ịnọghị n'akụkụ otu, gbalịa iji ọdụ ọdụ na-akwụsị mgbe niile. Lelee amụma ihu igwe tupu ị gawa ma kwado ụzọ ị ga-aga. (funky dance music) Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ịga ebe ịchọrọ ma wuo ụzọ gị ka oge na-aga, mana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọta ụzọ ọhụrụ ma achọghị ịla n'iyi, ịhazi ụzọ bụ ụzọ ị ga-aga. atụmatụ ngwaọrụ na ịntanetị ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụ ụzọ ọhụụ ị na-enwetụbeghị mbụ n'ọnụ ụzọ gị. (egwu dị egwu); n'ikpeazụ, otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka ịnya ịnya ka mma bụ ịnyịnya igwe ọhụrụ na-egbu maramara.
Mmetụta nke ịnwe igwe kwụ otu ebe na ụgbọala dị ka chocolate na friji. Ọ dị gị n’isi mgbe niile. Chọrọ ya, na mmetụta nke ihe ọhụụ, s freshness, freshness.
Ọ ga - enye gị mkpali mmegharị na njem ahụ ọbụlagodi nwere ike inyere gị aka ịme ọsịsọ site na mmetụta placebo. N'ezie! Enwere m igwe kwụ otu ebe ọhụrụ! Bgba ígwè ọhụrụ! - Oo chimoo. Ọ dị ka nwata maka ekeresimesi.
Ka o sina dị, ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ GCN maka otu esi eme ka ịnya ịnyịnya ígwè gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ, mana dị ka mgbe niile, anyị na ndị na-ekiri anyị ga-enwe mmasị ịnụ nke gị, nke ị nwere ike ịhapụ na ngalaba nkọwa dị n'okpuru. Ọ bụrụ na ịnweghị ụtụ, ị nwere ike ịme ya site na ịpị ụwa. Enwere isiokwu ole na ole na-abịa n'isi nso nke nwere ike ịmasị gị.
Can nwere ike ịhazi ụzọ mara mma ịnyịnya igwe ga-agbada ebe a, maọbụ ọ bụrụ na ịchọghị ịnụ ụtọ ịnya ịnya gị, n'okpuru ebe a bụ ndụmọdụ GCN maka otu esi eme njem ọ bụla
Ọ dị mma ige egwu mgbe ị na-agba ọgba tum tum?
A na-ahapụ ndị na-anya ọgba tum tumgee egwu mgbe ị na-agba ọgba tum tum. E nwere ụzọ ụfọdụ ndị ọzọnchebe, a pụrụ ịdabere na ya, na iwu ịme ya yana iji sistemu stereo naọgba tum tumna iji okpu agha Bluetooth.Na-ege ntị egwu mgbe na-agba ịnyịnyapụrụ n'ezie welie ahụmahụ.
Nwere ike ị na-eyi ntị ntị mgbe ị na-agba ọgba tum tum?
Ndị na-anya ọgba tum tumnwere ikena-ege ntị music mgbena-agba ọgba tum tum. Specific ụzọ ndị odi mfe, pụrụ ịdabere na, na iwu, dị ka iji a stereo usoro na gịọgba tum tumna iji okpu agha Bluetooth. Akwadoghi ka ijiekweisimgbena-agba ịnyịnyan'ihi iwu na ihe ọghọm nwere ike ibute.Dec. 1 2020
Cycgba ígwè ọ na-eme ka ike gị sie ike?
Otu uru kacha mma gbasaraịgba ígwèọ bụ na ọ n'eziena-emeimenke giịnyịnya ibu anya ka mma.Gịglutes ga-adị ike karị, nwekwuo ume, na nkwụsi ike nke abụba ndị ahụ ga-amalite gbazee, na-ahapụ gị nke ọmaisina anya dị ukwuu na ndị na-akpụkpọ uko bike nịịka.Mar 16 2014
Kedu ụdị ahụ ịgba ígwè na-enye gị?
Mgbe olegịdịịgba ígwè, karịsịa ime ụlọịgba ígwè,gịga-esi na-eleba akwara ndị na-esonụ na gịahụ: isi, eluahụ, azụ, glutes, quadriceps, hamstring, na obere ụkwụ. Nke aanamime ụlọịgba ígwèngụkọtaahụmgbatị na ọ bụghị naanị mgbatị ahụ ụkwụ.
Mgba igwe na-ada ụda n’ime apata ụkwụ?
Cygba ígwèbụ ezigbo ụzọ iji dobe ibu si na gịapata ụkwụ imen'ihi na ọ na-ere calorie. Kwesighi ịgba ịnyịnya ígwè gị ruo ọtụtụ awa n'otu oge iji hụ uru, mana gịmeekwesiri ịrapara na oge mgbatị oge.
okpu mkpuchi ntutu
Kedu ihe kacha mma ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe?
'Mmega ahụigwe kwụ otu ebebụkarịmmaKwesịrị ekwesị maka ndị geriatric n'ihi ike ịnọdụ ọdụ ma na-arụ ọrụ ike, 'ka Camargo na-ekwu. Site n'iji ya tụnyere, ọdịnalaigwe ịgba ọsọbụ ikekwemmaNhọrọ maka ndị na-enweghị mmerụ ahụ ma ọ bụ nsogbu mmegharị na ndị chọrọ mgbatị ahụ siri ike karị.Mar 23 2021
Kedu udiri egwu eji agba igwe?
Relaxed Pop Rock track na-ahụkarị guitar riffs na a mma piano nko akara. Production Music na ọnọdụ dị mma ma nwee vasatail. (More) (erughị) 4. Indie For Life (Full mix) 02:50
Enwere ngwa iji gee ịnyịnya ígwè?
I nwekwara ike ibudata otu n'ime anyị free ngwa na-enwe internet redio na ọkacha mmasị gị na ngwaọrụ. etiti abalị igwe kwụ otu ebe, m hụrụ gị n'anya. etiti abalị igwe kwụ otu ebe, m hụrụ gị n'anya. Nwee Obi Totọ Maka Ndị Agbata Obi Gị Nile, Ha Dị Gị.
Nwere ike ịmekọrịta egwu na mgbatị ịgba ígwè gị?
O siri ike ịmekọrịta egwu na mgbatị gị na-agba ịnyịnya n'ihi ọtụtụ ọsọ. Iji mata nke kachasị arụ ọrụ nke ọma, ịkwesịrị ịma ọsọ ọsọ gị. Ma ọsọ nwere ike ịdị iche iche dabere na gear, elu, na ihe ndị ọzọ.